क-कसले छाड्दैछन् ओलीको साथ् ? - Kantipath.com
क-कसले छाड्दैछन् ओलीको साथ् ?
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलासँगै संसद पुनर्स्थापना भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विभाजित दुई पक्षको लडाइँ अब संसदीय दलमा केन्द्रित हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ठूलो अन्तरले बहुमत गुमाएका छन्। त्यसैले अब उनले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको ४० प्रतिशत संख्या कायम राख्नका लागि अन्तिम शक्ति लगाउने छन्।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद थिए। जसमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनेका र सांसद सानु शिवाको निधन भएपछि हाल प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्ने नेकपा सांसदको संख्या १ सय ७२ कायम छ। जसअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि ८७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सभामुखले कुनै विषयमा निर्णायक मत हाल्नुपर्ने अवस्था आइपरे मात्र मतदान गर्ने अभ्यास छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको संसदीय दलको बैठकमा ९३ सांसद उपस्थित रहेको जनाएको थियो। त्यसमध्ये यसबीचमा गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, भैरबबहादुर सिंहलगायतका सांसद ओलीको पक्षमा लागेका छन्। ओली समूहमा रहेकी समिना हुसैन प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेकी छिन्।
नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आगामी दिनमा ओलीतर्फ रहेका कैयौं सांसद आफूहरुको पक्षमा खुल्ने दावी गरेका छन्। आफूहरुलाई बहुमत सांसदहरुको समर्थन रहेको र आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्ने सो पक्षका अन्य नेताहरुको पनि दावी छ।
कुराकानीका क्रममा एक नेताले आफ्नो पक्षमा थपिने सांसदको संख्या डेढ दर्जनसम्म पुग्ने दाबी पनि गरे। नेपालनिकट अर्का एक नेताले आफूहरुसँग निरन्तर कुराकानीमा रहेका र आउने संभावनासहित छलफल गरी २१ जना सांसदहरुको सूचीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरिएको बताए।
‘अहिलेसम्म बिभिन्न ढंगले निकटता रहेका सांसदहरुले यो विषय अघि बढाउनु भएको छ तर कतिपयको हकमा चाहिँ निश्चित विषयहरुमा थप सुनिश्चितताका लागि शीर्ष नेतृत्वबाटै कुराकानी र केहि पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ बुधबार संसदीय दल परिसरमै भेटिएका ती नेताले भने, ‘नेताहरुको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले शीर्ष तहबाटै पहल गर्न आवश्यक भएको हो।’
त्यसो त, यसबारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता तथा सांसदहरुका आआफ्नै मूल्यांकन तथा विश्लेषण रहेको पनि पाइयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलमा ओलीको ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा जोड दिएको छ। अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले कुनै दल विभाजन भई नयाँ राजनीतिक दलको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यति संख्या देखाउन नसक्ने समूहले कुनै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल गठन गर्न सक्दैन।
संसद पुनर्स्थापनापछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान आफूसँग भएको संख्या अनुकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा जाने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा निकै अल्पमतमा रहेका ओलीले अल्पमतमै भए पनि तुलनात्मकरुपमा केहि बलियो स्थिति रहेको संसदीय दलमा रहेको समर्थन कायम राख्ने र सोहि संख्यालाई आधार मानेर अध्यादेश ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाका भनेर चिनिन्छन्। उनी पूर्व एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा खुलेरै ओलीको पक्षमा उत्रिएका थिए। पार्टीमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुँदा उनी ओलीकै बचाउमा उत्रिन्थे। पछिल्लो पटक संसद विघटकै पक्षमा थिए,उनी। अर्थात् ओलीको कदम उनलाई उचित लागेको थियो।
तर सर्बोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापनाको फैसला आएपछि उनको मान्यता र अभिव्यक्ति एकाएक बद्लिएको छ। पार्टीको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खेमा र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुकै शैलीमा उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा आगामी राजनीतिक बाटो सहज हुने मान्यता अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका अर्का बफादार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद पुनःस्थापित भएमा प्रधानमन्त्री र आफूहरु नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए, केही दिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामाबारे बोल्न किन हतार गरेको भनेर हप्काएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
संसद पुनःस्थापनाको फैसला आएलगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको उक्त अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बुधबार ओली पक्षीय नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै पत्रकारहरुले सोही प्रसंग कोट्याउँदा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मामिला टुंगो नलागिसकेको भनेर टारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि रहेको बुझिएको छ। यसबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहेका नेता विश्वकर्माले अब ओली पदमा रहिरहँदा नेकपा एकताको सम्भावना पनि टुट्ने बताएका छन्, उनी निकट एक केन्द्रीय सदस्यसँग।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ । दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल र गौतमबीच करिव एक घण्टा भेटवार्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधसभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन तथा दाहाल-नेपाल समूहलाई सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरेका नेता गौतम विहान ७ बजे खुमलटार पुगेका थिए ।
भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने केही खुलाइएको छैन । सर्वोच्चको फैसलासँगै नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा शुरू भएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षमा नखुलेका गौतमले पार्टी एक ढिक्का बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
Previous Previous post: पाँच वर्षअघि उपभोग मिति समाप्त दाल बिक्री
Next Next post: साँखु र शालिनदी क्षेत्रमा डेढ सय वर्ष पुरानो भीमसेन जात्रा
आज काग तिहार, धनवन्तरी जयन्ती, अन्तर्लिङ्गी जनचेतना दिवस
हेर्दाहेर्दै आँखैअगाडि घर पुरीयो
सभामुख सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा : आज सुनुवाई नहुने
के पूर्वमन्त्री र आईजीपीको हातमा हत्कडी लाग्दैछ ?